Osho, wemazuva ano asinganzwisisike uyo anounza huchenjeri kubva panguva dzekare - AFRIKHEPRI
Osho, mumwe wenhema wenguva ino anounza huchenjeri hwekare
Osho ndeimwe yemazuva ano isinganzwisisike iyo inounza huchenjeri hwenguva dzekare kupindura mibvunzo yevarume nevakadzi nhasi. Inojekesa hunhu hwetsika dzese dzekunamata nedzemweya: Sufism, Buddhism, Tantra, Tao, Yoga, Zen, Hinduism, Chikristu, Hasidism ...
Osho is iconoclast iyo inopa chiratidzo chitsva chevanhu uye ichi chisanganiswa chisingafungi chinoita kuti iye ave mumwe wevatenzi vekunamata nhasi!
Ari panguva imwe chete Zen, Sufi uye Tantric master.
Master Zen, nekuti inokatyamadza uye inoparadza zvese zvatinotenda uye nezvatakatakura! Mazana ake ehurukuro pane zvinyorwa zvakasiyana-siyana sekufungisisa, manzwiro, zen, zvepabonde, kufa, zvematongerwo enyika, rudo, dzidzo, sainzi, chinamato kana kuda zvemweya kunotimanikidza kuti tizvitarise isu pachedu uye kuvimba neyedu intuition uye kungwara pane kutevera chitendero, pfungwa kana maitiro akangoti. Anosimbirira: kusava nechokwadi uye tsvaga nzira yako wega!
Sufi Mudzidzisi, nokuti anoramba achiyeuchidza kuti kufungisisa hakugoni kuparadzaniswa nekuvhura kweMwoyo uye kuti hupenyu hupemberera, kutamba. Iwe wakanganwa kutanga kurarama! Munhu wemazuva ano ave akaoma zvikuru. Dzokera kuShufi ... kuseka, kutamba uye kunakidzwa noupenyu!
Mudzidzisi weTantra, nokuti anobatanidza muviri uye zvepabonde mune zvakaratidzwa zvemweya: "kurarama hutano hwako! "," Zvitendero zvose zvinosanganisira chiKristu kudzvinyirira zvepabonde "uye" Ndinopesana nemhando dzose dzekudzvinyirira nokuti zvose zvinotungamirira mukutsveyamisa ... "uye zvakare, anotinyevera pamusoro pekunopesana, kuita zvepabonde pasina rudo uye anopa kuti murume nemudzimai vashandure zvepabonde, rudo nekufungisisa kuburikidza neTantra.
Maererano naOsho, mupfumi chete ari mukati uye kunze anokwanisa kufara uye anofananidzira tariro yekushandura pasi rino. Munhu mutsva anofanira kunge ari Zorba muBuddha anotiudza, zorba anomiririra pasi, kunaka kwehupenyu uye mufaro wekurarama neBuddha anomirira kuziva, kufungisisa uye uchenjeri.
Nokuda kweizvi, akasika nzira dzakadai sekufungisisa kushingaira uye Mystic Rose inokubvumira kupumha, kuchinja nokukurumidza, uye kurarama zvizere. Uye anotsigirawo kurapwa: "Zvimwe zvirwere zvinogona kukugadzirira kufungisisa. "
Osho akasiya muviri wake muna 1990 uye hurukuro dzake zvino dzakabudiswa mumabhuku anopfuura mazana matanhatu uye mumitauro makumi mashanu uye dzinoita seine chido chakasiyana zvikuru nevanhu: muU.SA, Europe asiwo muIndia, Iran, Russia neChina ...
Nharaunda yaro yekufungisisa muIndia inopfuurira nhasi kuva imwe yenzvimbo huru dzekukura mumweya munyika, ichikwevera zviuru zvevanhu vanobva kune dzimwe nyika vachiuya kuzokufungisisa, kurapa, basa remuviri uye maitiro ekugadzira maitiro.
Kufunga: Kuvapo muhupenyu
3 nyowani kubva ku € 9,50
2 yakashandiswa kubva € 7,87
kubvira waMay 25, 2020 4:38
Chero bedzi ndakasviba - Maya Angelou
Thanks for pinda kupinza hurukuro